Umkhombandlela Ovela Ku-Semalt Ukugwema I-Malware
I-imeyili ogaxekile ne-intanethi inikeza abaduni ngokufinyelela kalula kuma-computer akho kanye nolwazi. Ngomzuzwana noma amabili, ukufinyelela kwakho kunciphile okusho ukuthi awukwazi ukuvula, wabelane noma ususe noma yimaphi amafayela akho. Abaduni bakucela ukuthi ukhokhele isihlengo ngaphambi kokuba uphinde uthole ukufinyelela kumakhompyutha wakho siqu. Yiqiniso, kunenqwaba ye-software, izinhlelo, namathuluzi ongayilanda ukuze unciphise inani lokuhlaselwa kwe-intanethi. Iningi le-software nezinhlelo zivimbela ukuhlaselwa kwegciwane ne-malware, kodwa ayikwazi ukugcina uhlelo lwakho lwekhompyutha luphephile wonke. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ungathembeli kula mathuluzi futhi ubheke ezinye izindlela.
U-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt Amasevisi Edijithali, unikezela kule ngqungquthela imibono ebalulekile yokulwa ne-malware.
Ngenhlanhla, awudingi usizo lwekhompyutha noma uhlelo lokuvikela ikhompyutha yakho siqu ngoba amathuluzi nezinhlelo ezehlukene zikhona ukukusiza kulokhu. Kumele uqinisekise ukuthi ufake isofthiwe ye-antivirus. Kubalulekile ukuyibuyekeza njalo. Qinisekisa ukuthi isevisi yakho yokuzikhethela ibuyekeziwe futhi enye yezingcono kakhulu. Kufanele uyiqhubeke ngenkathi usebenzisa i-intanethi ukuze ihlole ngokuzenzakalelayo isistimu yakho iphinde ikugcine ubuyekezwe ngalokho okwenzekayo. Ungahlola konke ngesandla ukuze wazi kabanzi mayelana nezinsongo ezikhona futhi uzilahle.
Uma ulanda isofthiwe futhi usebenzisa isilingo, kubalulekile ukuhlola izici zayo ngaphambi kokuthenga. Kunezinye izinhlelo zokusebenza futhi kwi-intanethi ezingalinganiswa futhi ziqinisekiswe ngaphambi kokukhetha uhlelo olufanele lwe-antivirus. Qinisekisa ukuthi ithuluzi lakho le-antivirus likwazi ukugcina imininingwane yakho ivikelwe. Kumele kube lula ukulanda futhi kungokwawebhusayithi evuselelwe futhi eyiqiniso. Awudingi ukulanda isofthiwe ye-antivirus kusuka emithonjeni engekho emthethweni. Ngisho nezindawo ezisemthethweni ngokuvamile zinezinhlelo ezithathelwanayo ezingcono ukuhlala kude.
Uma kuziwa ekufakeni isofthiwe ye-antivirus, kufanele unake lokho okufakiwe kwikhompyutha yakho. Phakathi nale nqubo, akufanele uchofoze kumawindi we-pop-up noma ufake ezinye izinto ongajwayelekile. Kunamathuba ukuthi lokhu kuzozama ukufaka izengezo ze-browser kanye namabha yamathuluzi ohlelweni lwakho, kufanele ugcine lezi zinto kude kwikhompyutha yakho siqu njengoba ziqukethe ama-viruses kanye ne-malware kwinani elibalulekile.
Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi kunenqwaba yeziphequluli zewebhu ngaphandle lapho. Lokhu kusenza sidideke njengoba sonke sibonakala sihle futhi sinikeza izici eziningi. Ngenkathi ulandwa futhi ufaka isiphequluli, kufanele uqiniseke ukuthi uvele ngokugcwele futhi unamathuluzi anqulo wesi arab ehambisana nawo.
Okokugcina kodwa hhayi okungenani kufanele ukwazi ukuqhuba isofthiwe ye-antivirus ngesiphequluli sakho ngendlela engcono. Kumele futhi ukwazi ukuvula okunamathiselwe futhi uchofoze izixhumanisi zangempela ngaphandle kwenkinga. Ngesikhathi esifanayo, kufanele uzigcine kude nezinamathiselo ze-imeyili ezingaziwa namafasitela we-pop-up njengoba zingase zibe nezinambuzane kwinani elikhulu. Skena uhlelo lwakho lwekhompiyutha kabili ngesonto ukuvimbela ukuhlasela okubangelwa yi-viral. Shiya amafasitela ongawazi lutho mayelana nokuthi angase ahlasele amakhompyutha akho.